Fiaraha-miasa amin’ny Amerikanina: 25 taona niasana teto amintsika ny Corps de la Paix | NewsMada
Fiaraha-miasa amin’ny Amerikanina: 25 taona niasana teto amintsika ny Corps de la Paix
Mankalaza ny faha 25 taona niasany teto Madagasikara ny mpilatsaka an-tsitrapo amerikanina ao amin’ny Corps de la Paix. Omaly, niampy 40 indray izy ireo izay nahaita fihanianana ary hiantsehatra amin’ny tontolon’ny fampianarana teny anglisy.
Niorina voalohany teto Madagasikara tamin’ny volana novambra 1993 ny Corps de la Paix. Mpilatsaka an-tsitrapo sivy izy ireo no tonga voalohany teto, tamin’izany, ary notendrena hiasa tany Taolanaro, Morondava, Ambatondrazaka, Tsiroanomandidy, Fandriana, Ambositra, Antsirabe, Fenoarivo Atsinanana ary Mananjary. Efa nandray mpilatsaka an-tsitrapo maherin’ny 1393 nanatontosa iraka ho amin’ny sehatra maro i Madagasikara, tao anatin’ny 25 taona niasan’ireo mpilatsaka n-tsitrapo teto ireo.
Anisan’ny himasoana ny fandriampahalemana sy ny firahalahiana tamin’ny alalan’ny fanamafisana ny fiarahana mianatra, ny fifanakalozana ara-kolontsaina rehefa miara-miasa akaiky amin’ireo fianakaviana Malagasy manana fandavan-tena sy finiavana hanatsarana ny fanabeazana, ny fambolena ary ny fahasalamana. Amin’izao fotoana, 120 ireo mpilatsaka an-tsitrapo amerikanina miasa eo amin’ny sehatry ny fampianarana, fambolena ary fahasalamana manerana an’i Madagasikara. .
Marihina fa namorona ny Corps de la Paix, ny 1 martsa 1961, tamin’ny alalan’ny didy hitsy volana ny filoha amerikanina John F. Kennedy. Efa nihoatra ny 57 taona izao no nanapariahan’ny Corps de la Paix ny fandriampahalemana sy ny firahalahiana manerana izao tontolo izao. Raha ny ara-tantara, efa mihoatra ny 230.000 ireo amerikanina nanao asa fanompoana tato amin’ny Corps de la Paix, mba hampisy ny fifankahazoana eo amin’ny Amerikanina sy ny mponina amin’ireo firenena 141 izay nampiantrano azy reo. Amin’izao fotoana izao dia maherin’ny 7300 no isan’ireo mpilatsaka an-tsitrapo miasa amina firenena miisa 65 mahery maneran-tany.
Mpilatsaka an-tsitrapo 40 vaovao hampianatra teny anglisy
Mpilatsaka an-tsitrapo miisa 40 mianadahy avy ao amin’ny Corps de la Paix no nampanaovin’ny mpiandraiki-draharahan’ny masoivoho amerikanina, Atoa Stuart R. Wilson, fianianana, omaly, tetsy Ivandry.
Hiasa eo amin’ny sehatry ny fampianarana sy ny fampiroboroboana ny teny anglisy ireo mpilatsaka an-tsitrapo ireo rehefa avy nahavita fiofanana nandritra ny 11 herinandro. Taorinan’ny fiofanana momba ny teny malagasy, fianarana ny fomba amam-panao sy ny kolontsaina malagasy ary ireo teknikam-pampianarana samihafa dia handeha hamita iraka any amin’ireo tanàna manerana an’i Madagasikara izay voatendry hipetrahany sy hiasany mandritra ny roa taona ireo mpilatsaka an-tsitrapo ireo.
Ireo mpilatsaka an-tsitrapo eo amin’ny sehatry ny fanabeazana sy ny fampiroboroboroboana ny teny anglisy dia hanampy ireo mpianatra sy mpampianatra tsy afaka hanana fitaovana arifomba eo amin’ny fianarana sy fampianarana teny anglisy.
Hampianatra any amin’ireo sekolim-panjakana izy ireo mba hampivoatra ny teny anglisy ho lasa fitaovana mahomby eo amin’ny fampandrosoana, indrindra ho an’ny mpianatra sy mpampianatra amin’ny CEG sy Lycée ary oniversite sasantsasany.
Araka ny maha mpampianatra teny anglisy azy ireo dia handray anjara ihany koa izy amin’ny fanatsarana ny fahaizan’ny mpampianatra mampiasa ny teny anglisy, hifampizara traikefa sy ny fomba fampianarana samihafa ary hiezaka hampitombo sy hanatsara ireo fitaovana enti-mampianatra.
Hanentana sy hanabe ireo mpiara-monina ihany koa izy ireo amin’ny alalan’ny karazana hetsika toy ny fikarakarana “voyage d’études”, fanofanana mpampianatra, na koa ireo sehatrasa fanampiny toy ny fanentanana hiady amin’ireo olana misy amin’ny lafiny fahasalamana na ny sehatrasa momba ny miralenta, indrindra ny fikarakarana ny lasy fiofanana ho an’ny mpitarika natokana ho an’ny zazavavy.